Madaxweynaha Eriteriya oo booqasho maalmo qaadaneysa ku tegay dalka Imaaraadka Carabta – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweynaha Eriteriya oo booqasho maalmo qaadaneysa ku tegay dalka Imaaraadka Carabta
Madaxweynaha Eriteriya oo booqasho maalmo qaadaneysa ku tegay dalka Imaaraadka Carabta
Abu dhabi (Madal Furan) – Booqasho qaadan doonta mudo Saddex maalmood ayah ayaa lagu soo waramayaa in Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki uu ku tegay dalka Imaaraadka Carabta.
Madxweyne Isaias ayaa wuxuu kulamo la yeeshay Madaxda dalka Imaaraadka isagoo ay si gaar ah isu arkeen dhaxal sugaha dalkaas Maxamed Bin Zayid, oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira maalgashiga, ganacsiga iyo dhuun shidaalka qaada oo Imaaraadka Carabtu ka hirgelin doonaan inay isku xirto wadamada Itoobiya iyo Eriteriya.
Socdaalka Madaxaweynaha Eriteriya ayaa wuxuu ku soo beegmayaa kadib markii maalinimadii Axadii ay Madaxda Itoobiya iyo Eriteriya ay heshiiskii ay Boqortooyada Sacuudigu markhaantiga ka aheyd ku kala saxiixdeen waddana Sacuudiga.
Waddamada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ayaa ay muuqataa inay ahmiyad gaar ah siinayaan waddamada kulaala Badda Cas marka laga fiiriyo arrimaha Ganacsiga, Muhiimadda Gacanka, Ganacsiga iyo Milaterigaba, waa taas muhiimada ay Labadan dowladood xoogga u saareen inay nabad ka dhex dhaliyaan Labada dal ee Itoobiya iyo Eriteriya.
Dowladda Soomaaliya oo albaabada u laabtay xabsiga godka Jilacow
Libaaxyo argagixiso ku riday xoolo dhaqato ku nool Tuulada Kieni ee dalka Kenya
SAWIRO:Madaxweyne Shariif Xasan oo Baydhabo kula kulmay Wafdi ka socda QM iyo Midowga Afrika